China Semi-mandeha ho azy Line famolavolana sy mpamatsy | Sofiq
Semi-Automatic Molding Line no fitaovana tsara indrindra amin'ny famokarana betsaka ho an'ny orinasa mpamokatra vy. Ny tombony dia ny fampiasam-bola kely kokoa, ny fiverenana haingana, ny fihenan'ny herin'ny asa, ny fampiakarana ny kalitaon'ny mpilalao, ny fandidiana mora foana ary ny fikojakojana.
Ny karazana tsipika famolavolana dia mandray ny milina famolavolana joet-presse, ny bobongolo ny mpampita ny famindrana lasitra dia mandraraka hatrany amin'ny cool. Ny mpiasa dia mitondra tavoahangy sy bobongolo fasika amin'ny alàlan'ny rivotra mihantona, ary koa ny famenoana ny fotony, ny fantsom-pifaneraserana ary ny fandrotsahana sns, ny fizotrany dia mandray ny fandidiana semi-automatique, ny tavoahangin-tsolika miverina.
Ny firafitry ny fitaovana lehibe dia ireto manaraka ireto:
Tsipika famolavolana semi-mandeha ho azy (mifanaraka amin'ny haben'ny tavoara).
Rano roa lalana mihantona.
Paingotra peratra, ladle sns.
Masinina fasika latsaka.
Miverina milina fitaterana tavin-drano.
Takelaka (rindrina tokana, fitaovana ： vy metaly).
Ity milina ity, ny fitaovana collocated ho an'ny tsipika famolavolana, dia manao dingana hafa toy ny famolavolana, famenoana fototra, fanariana, fikororohana tavoahangy mifandray amin'ny famoronana tsipika famolavolana akaiky. Izy io dia fitaovana tsara indrindra hahatsapana ny famolavolana sy ny automatisation mould. Amin'ny ankapobeny, dia sperated tsy tapaka izy io, fa mety ho fomba mandeha an-tongotra ihany koa ho toy ny fepetra takiana. Ny halavany sy ny fisehony rehetra dia miankina amin'ny famaritana ny famolavolana sy ny toetoetran'ny atrikasa.
Ny famaritana ny tsipika fanodinana semi-mandeha ho azy
Hafainganana azo ovaina
Teo aloha: Masinina mandraraka semi-mandeha ho azy
Manaraka: Tsindry fanamafisana tsindry
Famolavolana tavoahangy, Masinina bobongolo, Milina Punch Out, Masinina fanodinana semi-mandeha ho azy, Sandbox, Famolavolana koveta fanariana,